वास्तुशास्त्र : सुत्नेबेला सिरानीमुनी राख्नुस् यी शुभ चिज भाग्य चम्किन्छ !
December 31, 2021 N88LeaveaComment on वास्तुशास्त्र : सुत्नेबेला सिरानीमुनी राख्नुस् यी शुभ चिज भाग्य चम्किन्छ !
वास्तु र ज्योतिषशास्त्रका अनुसार केही चीजहरू टाउकोको छेउमा राख्दा हानि हुन्छ भने केही चीजहरू टाउकोको छेउमा राख्नाले सौभाग्य र स्वास्थ्य लाभ हुन्छ। आउनुहोस् जानौं कि राम्रो कुरा राख्दा भाग्य चम्किने छ । १. पानीको लोटा: तामाको भाँडो पानीले भरिएको शिरानीकाे छेउमा राख्नुहोस् र बिहान बोट बिरूवामा राख्नुहोस्। यसो गर्नाले स्वास्थ्य लाभ हुन्छ । 2. चक्कु: […]
धनको हिसाबले वृष राशिका लागि २०२२ साल कस्तो रहनेछ ? आर्थिक राशिफल
December 31, 2021 N88LeaveaComment on धनको हिसाबले वृष राशिका लागि २०२२ साल कस्तो रहनेछ ? आर्थिक राशिफल
वृष राशिफल २०२२ अनुसार आर्थिक जीवन वृष राशिफल २०२२ अनुसार धनको हिसाबले यो वर्ष सामान्य रहेको भए पनि शनि ग्रह दशौं भावमा विराजमान भएकोले दशौं भावलाई कर्म गृह पनि भनिन्छ । यस कारणले वृष राशिका लागि शनिले आम्दानीको नयाँ बाटो खोल्नेछ। प्रारम्भिक महिनाहरूमा आर्थिक स्थितिमा खासै परिवर्तन नहुने भए पनि वर्षको अन्त्यसम्ममा सामान्यभन्दा राम्रो पैसा […]
धनको हिसाबले मेष राशिका लागि २०२२ साल कस्तो रहनेछ ?
December 31, 2021 December 31, 2021 N88LeaveaComment on धनको हिसाबले मेष राशिका लागि २०२२ साल कस्तो रहनेछ ?
ज्योतिष 2022: नयाँ वर्ष धनको लागि कस्तो रहनेछ, कसलाई पैसा मिल्छ, कसले खर्च गर्छ? वर्षको सुरुवात राम्रो रहनेछ। जनवरीमा राम्रो नतिजा प्राप्त गर्न सकिनेछ। आर्थिक जीवनमा राम्रो परिवर्तनको आशा गर्न सकिन्छ, घरको खर्च वा आवश्यकता पूर्ति गर्न विदेशबाट पनि धन आउने देखिन्छ, तपाईको व्ययको स्वामी तथा विदेशको बाह्रौं भावकाे बृहस्पति तपाईको आय भावमा उपस्थित हुनेछ। अप्रिल […]
एमाले सम्झिएर रोइन् माइती गाउँ पुगेकी मन्त्री झाँक्री
December 31, 2021 December 31, 2021 N88LeaveaComment on एमाले सम्झिएर रोइन् माइती गाउँ पुगेकी मन्त्री झाँक्री
गुल्मी । शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री गृह जिल्लाको एक कार्यक्रममा रोएकी छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सचिव समेत रहेकी झाँकी शुक्रबार गुल्मी पार्टी कार्यालयको उद्घाटन कार्यक्रममा राजनीतिक जीवनको कठिनपूर्ण यात्रा सम्झिँदै रोएकी हुन् । एकीकृत समाजवादीको पार्टी कार्यालय नजिकै एमाले पार्टी कार्यालयको पक्की भवन छ । त्यही भवन निर्माण गर्दाको पल सम्झिँदै उनले भनिन, ‘थुप्रै […]
नयाँ वर्ष २०२२ मा यी ४ राशिका व्यक्ति हुँदैछन् मालामाल, मिल्नेछ भाग्य लक्ष्मीकाे कृपा !
December 31, 2021 N88LeaveaComment on नयाँ वर्ष २०२२ मा यी ४ राशिका व्यक्ति हुँदैछन् मालामाल, मिल्नेछ भाग्य लक्ष्मीकाे कृपा !
नयाँ वर्ष २०२२ मा सबै राशिका मानिसको आर्थिक जीवनमा उतारचढाव आउने भएपनि ग्रह गोचरको स्थितिका आधारमा ४ राशिका व्यक्तिले यस्तो गर्नु नपर्ने बताइएको छ । आर्थिक संघर्ष (आर्थिक राशिफल नयाँ वर्ष २०२२)। उनीहरूलाई भाग्यले साथ दिनेछ र उनीहरूले धेरै पैसा पाउनेछन्। आउनुहोस् जानौं ती ४ राशिका कुन हुन्। मेष राशि यो वर्ष मेष राशिका व्यक्तिहरूको […]
December 31, 2021 N88LeaveaComment on ॐ ॐ ॐ भगवान पशुपतिनाथकाे दर्शन गरी हेर्नुस् पुष १७ गते शनिबारकाे राशिफल
वास्तवमा ज्योतिषशास्त्रमा शुभ र अशुभ घडीहरू ग्रहहरूको चालबाट बनाइन्छ, जसले हाम्रो जीवनमा सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव पार्छ। अर्थात् आजको दिन तपाईका लागि सामान्य होस् वा नराम्रो । यहाँ तपाईंले आफ्नो राशि अनुसार आफ्नो राशिफल थाहा पाउन सक्नुहुन्छ । पुष १७ गते शनिबारकाे राशिफल मेष राशि व्यापारमा सुस्तता आउन सक्छ । आम्दानीमा निश्चितता रहनेछ। समय चाँडै […]
राप्रपा र विवेकशील साझा पार्टीबीच एकता ! राजतन्त्र फर्काएरै छाड्ने
December 31, 2021 N88LeaveaComment on राप्रपा र विवेकशील साझा पार्टीबीच एकता ! राजतन्त्र फर्काएरै छाड्ने
काठमाडौं । विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र विवेकशील साझा पार्टी मिलाएर नयाँ पार्टी गठन गर्न सकिने प्रस्ताव ल्याएका छन्। शुक्रबार राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, महामन्त्री धवलशमसेर राणासँगको भेटमा पार्टी एकताको विषयमा छलफल भएको थियो। त्यो छलफलका क्रममा मिश्रले दुबै पार्टी मिलाएर नयाँ विकल्पमा जानुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन्। ‘विवेकशील साझा राप्रपामा […]
सीईओ रेग्मीप्रति मन्त्री आले फायर ‘यस्तो साँढेलाई राखेर बोर्ड चल्छ ?’
December 31, 2021 N88LeaveaComment on सीईओ रेग्मीप्रति मन्त्री आले फायर ‘यस्तो साँढेलाई राखेर बोर्ड चल्छ ?’
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले पर्यटन बोर्डमा धनञ्जय रेग्मी सिइओ रहेसम्म बोर्डको प्रगति नहुने बताएका छन् । पर्यटन बोर्डको स्थापना दिवसका अवसरमा शुक्रबार बोर्डमा आयोजित कार्यक्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन् । सिइओ रेग्मीको आलोचना गर्दै मन्त्री आलेले भने– धेरै रिसाउनुभो जाम् रक्सी खान भन्ने साँढेलाई राखेर बोर्ड चल्छ ? […]
यो हो २८ करोड राजस्व छलीका आरोपितको घर, लाै हेर्नुस्
December 31, 2021 N88LeaveaComment on यो हो २८ करोड राजस्व छलीका आरोपितको घर, लाै हेर्नुस्
बारा — पर्साको वीरगन्ज बजारबाट करिब ८ किलोमिटर उत्तरमा पर्ने बाराको परवानीपुर चोकबाट थप करिब पाँच किलोमिटर उत्तरपूर्व लागेपछि उमाशंकर रायभरको घर पुगिन्छ । १२ धुर ऐलानी जग्गामा बनेको खपडाले छाएको कच्ची घरको बीचोबीचबाट देखिन्छ खुला आकाश । प्रस्ट छ, यो घरले बर्खामा आकाशे पानी र हिउँदमा शीतलहरबाट ओत दिँदैन । पुस पहिलो साताको एक बिहान उमाशंकरको घर […]
‘पहिले त काले–काले मिलेर खाउँ भाले भन्थे, अब आयो आले ’
December 31, 2021 December 31, 2021 N88LeaveaComment on ‘पहिले त काले–काले मिलेर खाउँ भाले भन्थे, अब आयो आले ’
काठमाडौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले आफ्नो इमान बेचेर मन्त्रीको कुर्सीमा नबस्ने बताएका छन् । शुक्रबार नेपाल पर्यटन बोर्डको २३ औँ वार्षिकोत्सवमा बोल्दै मन्त्री आलेले इमान बेचेर मन्त्रीको कुर्सीमा नबस्ने बताएका हुन् । उनले हाल छानबिनका क्रममा रहेका बोर्डका सीईओ धनञ्जय रेग्मीले टोयोटाका गाडी बेचेर आफ्नो इमान किन्न खोजेको भन्दै आक्रोश व्यक्त […]